“Bulshada Rayidka”, Waa Tee, Waa Tumaa?
Weer magaceedda “Bulshada Rayidka”, waa weer beryahan danbe hadal-haynteedu socotay, balse macnaha iyo nuxurka ay xanbaarsantahay ay dahsoonyihiin oo ayan si dhab ah u muuqan. Sidaa aawadeed baana halkudhegga maqaalkan uu u yahay “Bulshada Rayidka, Waa Tee, Waa Tumaa?. Wuxuuna maqaalkan u dhuun daloolayaa “Bulshada Rayidka” waxa ay tahay macno ahaan iyo fikrad ahaanba iyadoo gunaanadka iyo gebo-gebada maqaalkuna ay duluc u noqon doonto ka jawaabidda sua’aasha ah: Sow waxa loogu yeero “bulshada rayidka” ah ee Soomaaliyeed” kama dhigna dallad meel aan roob iyo cadceed toona ka jiran dul heehaabaysa? [qoraalka oo dhan
Heer caalami ahaan, hadal-haynta fikradda “bulshada rayidka” ah waxay muhiimad yeelatay muddo haatan laga joogo 20-tan sanadood, siiba waxaa lala xiriiriyaa mawjadihii is-daba-joogga ahaa ee dimuqraadiyaynta ee uu hannaanka dumuqraadiyaddu ku faafay wadamadii hore loogu dhaqi jiray nidaamka keli-talisnimada oo ka bilowday Ameerikada Laatiinka ah (Ameerikada Koonfureed, Ameerikada Dhexe iyo Meksiko), iyo Yurubta Bari, kuna sii baahay dunida soo koraysa inteeda kale. Waxaana loo arkay bulshada rayidka mid wax badan ka taraysa moosidda iyo xadaynta awoodaha dawladaha ka jira dalalka ay ka jiraan nidaamyada keli-taliska ah, xoojinaysana awood-siinta shacabka, hubantina ka dhigaysa hirgelinta xisaabtan iyo dabagal siyaasadeed, iyo kor u qaadidda tayada xukunka (xukun-wanaag).
Macno ahaan waxaa adag in si sugan loo qeexo bulshada rayidka ah, maxaa yeelay waxaa loo qeexaa siyaabo kala duwan. Balse waxaa jiraa qeexid guud oo ah:
Kooxo amaba jamciyaad abaabulan oo gooni ka ah dawladda qaran oo aanay xukuumad u talin oo iyaga is xukuma, haystana isu-talis iyo xukun-hoosaad xagga xiriirka (cilaaqadka) ay la leeyihiin dawladda oo ay si mutadawicnimo ah (si iskaa ah) u dhiseen (abuureen) xubnaha bulshada (mujtamaca) si ay u gaaraan una daafacaan danaha (masaalixda) ay uu miiganyihinn (u ololaynayaan, u doodayaan), qiyamkooda (mabaadii’ida xukunta hab-dhaqanka) iyo waxyaalaha goonida loogu garto
(Si aad u daalacato tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan doodda la xiriirta siyaabaha kala duwan ee loo qeexay bulshada rayidka, eeg Gordon White, “Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground”, Democratization (Autumn, 1994) pp. 375-390).
Noocyada kala jaadka ah ee ururrada bulshada rayidka ah waxaa ka mid ah kuwa ku xusan taxdan hoose:
1. Ururrada Bulshada
Ururrada bulshada waxaa ka mid ah: naadiyada dhallinyarada; kooxaha amaba naadiyada isboortiga; ururrada ardayda; jamciyaadka dugsiyada (iskuullada) iyo ardayda jaamacadaha ka baxay.
2. Ururrada u adeega danaha gaarka ah
Ururrada u adeega danaha gaarka ah waxaa ka mid ah : ururrada ay leeyihiin xirafadlayaasha amaba ururrada meheradaha ku dhisan; ururrada amaba ittixaadka shaqaalaha; ururrada beeralayda; jamciyaadka ay leeyihiin ganacsatada yar yar (tusaale ahaan kuwa waratada ah), ururrada ay ku bahoobeen shirkadaha waawayn, iyo bangiyada, iwm; ururrada xoogsatada muruq-maalka ah (waa kuwa qabta shaqo uu qof walba uu qaban karo oo aan u baahnayn xirfad amaba tab maskaxeed gaar ah).
3. Ururrada adeeg bixiyayaasha
Ururrada adeeg bixiyayaasha ah waxaa ka mid ah; ururrada bixiya adeegyada (khidmaadka) ay u baahnyihiin kooxaha bulshada.
4. Ururrada ku dhisan iskaa wax u qabso
Ururrada ku dhisan iskaa wax u qabso (is-xilqaanka, mutadwicnimada) waxaa ka mid ah: ururrada ay leeyihiin dadka ood-wadaagta (deriska, olloga , jiiraanka, jaarka) ah oo ay ku bahoobeen dadka wada deggan goob amaba xaafad, iwm; ururrada iskaashatooyinka, ururrada aan xukuumiga ahayn (aan wax lug ah ku lahayn dawladda) ee ka hawlgala xagga horumarinta.
5. Kooxaha miiganayaasha ah
Kooxaha miiganayaasha ah waxaa ka mid ah: kooxaha xuquuq-u-dirirka ah; ururrada u dooda daryeelka deegaanka; ururrada haweenka; ururrada matala una dooda xuquuqda ubadka (ciyaalka, caruurta, awlaadda); ururrada dadka naafada amaba curyaanka ah u dooda; ururrada u dooda kooxaha soo galootiga ah (muhaajiriinta), iwm.
6. Ururrada xagga dhaqanka/diinta/isirka
Uururrada noocan ah waxaa ku jira: jamciyadaha xagga diinta (caqiidada); ururrada qabaa’ilka (beelaha); kooxaha xagga afafka (luqadaha); ururrada fanka iyo suugaanta; ururrada u taagan sare u qaadidda diinta iyo dhaqanka kooxo gaar ah oo soo jireen ahaa muddo fog.
7. Dhaq-dhaqaaqyada Bulshadeed
Dhaq-dhaqaaqyada bulshadeed waxaa ka mid ah ururrada u dhaq-dhaqaaqa danaha kooxaha xagga isirka (jinsiga, sinjiga, , haybta, qabiilka, beesha, midabka, iwm) iyo kooxaha danaha deegaannada ay leeyhiin u dooda.
Haddaba marka aan u soo laabanno su’aashii maqaalka ee ahayd: Sow waxa loogu yeero “bulshada rayidka” ah ee Soomaaliyeed” kama dhigna dallad meel aan roob iyo cadceed toona ka jirin dul heehaabaysa, waxaa mudan in milicsi yar la cawl jalleeco, fikraddan bulshada rayidka ah goortay Soomaaliya ka curatay.
Sidii hore loo soo xusay fikrada bulshada rayidka ah waxay heer caalami ahaan si wayn u soo shaac baxday 20-tan sanadood ka hor, inkastoo asal ahaan fikradda bulshada rayidka ay tahay mid 20-tan sanadood ka fac wayn. Taasoo laga turjuman karo in fikradda bulshada rayidka ah ay ka hanaqaadi lahayd Soomaaliya bilowgii sannadihii sideetamaadkii. Dabcan waxaa xilligaas Soomaaliya ka jiray jabhado hubaysan oo qori ku dirir oo si militeri ah (ciidan ah) oo aan rayid (madani ahayn) ugu dagaallamayay mabaadii’idii amaba dan beeleedkii ay u jireen si ay xukunka ugu tuuraan taliskii militeriga ahaa taas oo meesha ka saaraysa haba yaraatee sheegasho ururro bulsho rayid ah, sababta oo ah ururrada bulshada rayidka ah tubta ay u maraan ka yool gaaridda danahooda amaba mabaadii’idooda waa tub nabadeed oo rayid ah.
Sheegis uma baahna in jawigii siyaasadeed ee cabburiska ku dhisnaa ee dalka Soomaaliya ka jiray xilligii sideetamaadkii uusan saamixi lahayn unkashada amaba soo if-baxa ururro bulshadeed oo rayid ah oo ka madax bannaan dawladda sida ku qeexan kor. Dabcan way jireen ururrro iskaashato iyo ururro iskaa wax u qabso ah, kuwo dhallinyaro, kuwo haween oo haddii ay ka madax bannaanaan lahaayeen xukuumadda lagu sifayn kari lahaa ururro bulshadeed oo raiyd ah, balse uruurradii jiray waxay ahaayeen garab ka mid ah garabyadii aaladda u ahaa siyaasadahii “dan-wadaagta” ku dhisnaa ee wixii loogu yeer jiray “Hanti-wadaagga Cilmiga ku dhisan”.
Markii horraantii sanadkii 1991-dii uu soo af-jarmay xukunkii keli-taliska ahaa, ee ahaa caqabadda ugu wayn ee hortaagnayd curashada ururro bulsho rayid ah oo dhab ah oo madax bannaan ayaa waxaa iyadana meesha ka baxday dawladdii qaran. Waxaana taa xigay fawdo iyo kala danbayn la’aan miyir-doorsoon ku riday bulshadii oo ilaa iyo maantadan taagan, taas oo loo aanayn karo sababta ay muddo sii horraysay oo ka mid ah horraantii sannadihii sagaashamaadkii ay u soo fufi waayeen ururrada bulshada rayidka ah maadaama xilligii sii horreeyay ee ka danbeeyay buruburka hannaanka dawladnimo ee Soomaaliya uu qiiq badan oo is-xasuuq iyo gumaad qabiil ah uu dalka hareeyay iyagoo ururrada bulshada ka hanaqaaday Soomaaliya muddadii ka danbaysay dabayaaqadii sannadiihi sagaashamaadkii oo uu qaacii yulyulayay yara damay.Waxaana mar uun cirka isku shareeray tirada noocyada kala duwan ee ururrada bulshada rayidka ah. Waxayna aad uga dhex muuqdeeen oo ay magac iyo muhiimad gaar ah ku yeesheen Shirkii Carta ee ka dhacay Jabuuti. Waxaana maanta Soomaaliya ka jira ururro aan cadadkooda la soo koobi karin oo u dooda mabaadii’i , afkaar iyo xuquuq aad u kal fog-fog oo kala jiho u socda ah, sida Ururka Garoobyada Soomaaliyeed iyo kuwo kaloo fara-badan oo aan maqaalkan lagu soo koobi karin.
Inkastoo ay ururro far-badan oo Soomaaliya ka jira ay sheegtaan in ay yihiin ururro bulsho rayid ah, bilkeedada amaba tijaabada dhabta ah ee looga baahanyahay in ay ka gudbaan waa labo tijaabo oo kala ah: ururrada bulshada rayidka ah ma abaabulanyihiin?; qiil amaba sabab ay u jiraan ma leeyihiin maadaama aysan Soomaaliya ka jirin dawlad qaran oo shaqaysa oo taabagal ah?
Waa tan horee, xagga abaabulka, Soomaaliya maanta kama jiraan ururro bulsho rayid ah oo abaabulan. Abaabulan waxaa loola jeedaa, leh qaab-dhismeed hoggaan oo cad oo ku dhisan sharciyad, tartan xor ah, la xisaabtan iyo dabagal iyo mansab (jago) muddadeedu xaddidantahay; leh Shir –sanadeed lagu dhagaysto warbixinno ku saabsan wadciga iyo xaaladda ururka, shirkaasoo ay ka soo qayb galaan xubnaha ururka, shirkaaso noqonaya hay’adda siyaadada iyo madax bannaanida leh, ahana tan ugu sarraysa ururka, oo haddii loo baahdana dib loogu soo doorto amaba xilka lagaga wareejinayo madaxda ururka ka dib loolan doorasho oo xor ah, cadaalad iyo fursad simanna ku dhisan; leh dastuur (axdi) iyo xeerar hoosaadyo qeexaya xeerarka xubinnimada ururka, xeerark doorashada madaxda iyo saraakiisha ururka; leh xeerarka anshaxa iyo asluubta ururka; leh xeerar hoosaadyo furdaamiya wixii muran ah ee dhaca marka uu ururka dhexdiisa is qabto; leh xubno joogto ah oo xajmi (baaxad iyo laxaad caqli-gal ah) leh, xubnahaasoo diwaan gashan.Waxaa hubanti ah in uusan maanta Soomaaliya ka jirin urur bulsho rayid ah oo xitaa tookh ahaan u sheegan kara in uu buuxiyay mid ka mid ah arrimaha kor ku xusan.
Marka aan u soo laabanno arrinta laabad ee ah maqanaanshaha dawlad qaran oo shaqaysa oo taabagal ah, waxaa meesha ka cad oo aan daliil u baahnayn in aanay Soomaliya ka jirin dawld heer qaran ah oo awood ku muquunin karta shacabka (dabcan waa muquunin sharci ah), lehna awood ay ugu taliso xuduudaha iyada u cayiman heer caalami ahaan. Marka maadaama ay xaaladda maanta Soomaaliya ka jirta ay tahay fawdo, ciidamo gaar loo leyahay, shacab si iskaa ah oo aanay dawlad wax lug ah ku lahayn u maaraynaya nolol- maalmeedkooda waxaa lama huraan ah in la is waydiiyo wuxuu yahay doorka ay buuxin karaan amaba waxay u taaganyihiin waxa loogu yeero bulshada rayidka ah maadaama fikradda gun-dhigga u ah fikradda bulshada rayidka ah ay salka ku hayso in awoodaha dawladda lagu oodo mooro (xero) oo la helo bulsho xor ah oo ka madax banaan faragelinta aan sharciga ahayn ee ka timaadda dawlad qaran sida dhacda marka aysan jiran bulsho rayid ah oo abaabulan, taasoo ka dhiganta bulsho qafilan oo cabbursan oo ay dawladdu cagta mariso. Sida ka muuqatta Shirka dib-u-heshiisiinta Soomaalida ee haatan ka socda dalka Kenya ururrada sheegta in ay yihiin bulshad rayidk ah waxay malaha u arkeen hogaamiye-kooxeedyad in ay yihiin humaaggii dawld qaran. Taana bulshada rayidka ah way ku gefeen oo waxay arkeen wir-wir iyo dhaan-dabagaale. Dawlad qaran oo hogaamiye-kooxeedyada laga dhawrana waxay la mid tahay oraahdii Soomaaliyeed ee oranaysay “diinkii dhaanshay”
Haddaba gunaanadkii iyo gebo-gebadii, jawaabta suaa’asha dulucda u ahayd maqaalkan ee ahayd: Sow waxa loogu yeero bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed kama dhigna dallad meel aan roob iyo cadceed toona jiran ku dul heehaabaysa? waa haa, waayo, waa ururro aan aababulnayn oo magac u yaal ah, oo an lahayn qaab-dhismeed hoggaan oo cad oo sharci ah ee ku dhisan tartan xor ah, mana uu jiro la xisaabtan iyo dabagal iyo mansab (jago) oo muddadeedu xaddidantahay; ma jiro Shir –sanadeed lagu dhagaysto warbixinno ku saabsan wadciga iyo xaaladda ururka, shirkaasoo ay ka soo qayb galaan xubnaha ururka, shirkaaso noqonaya hay’adda siyaadada iyo madax bannaanida leh, ahana tan ugu sarraysa ururka, oo haddii loo baahdana dib loogu soo doorto amaba xilka lagaga wareejinayo madaxda ururka ka dib loolan doorasho oo xor ah, cadaalad iyo fursad simanna ku dhisan; ma laha dastuur (axdi) iyo xeer hoosaadyo qeexaya xeerarka xubinnimada ururka; ma laha xeerarka doorashada madaxda iyo saraakiisha ururka; ma laha xeerarka anshaxa iyo asluubta ururka; ma laha xeerar hoosaadyo furdaamiya wixii khilaaf ah ee dhaca marka uu ururka dhexdiisa is qabto; ma laha xubno joogto ah oo xajmi leh oo diwaan gashan.
Maadaama isu-tagga ururrada tirada badan ee la isku yiraahdo bulshada rayidka ah loogu yeero dallad ayay munaasib ku tahay in lagu misaalo dallad ku dul heehaabaysa meel aan roob iyo cadceed toona ka jirin. Cadceedda amaba roobku waa ereyo macnahoodu maldahanyahay (sarbeeb ah) oo loola jeedo in dawladdii qaran ee uu cabburiska, kadeedka, cadaadiska, dulmiga iyo qamciga ka iman lahaa aysan meeshuba oollin oo aysan jirin oo cabburisku uu ka yimaado kooxo si gaar ah u hubysan oo aan mas’uul iyo xil-kas ahayn, illeen dallad muraad baa loo qaataa ee shoob iyo xarrago looma qaatee. Sidaa aawadeed waxaa la habboon ururrada sheegta in ay metalaan oo ay wakiilasho ka haystaan bulshada raydika ah in aanay si aan ula-kac amaba ku tala-gal ahayn aysan sharciyad aanay mutaysan u siinin hogaamiye-kooxeedyada oo ay dib isu saxaan, oo ay dib isu abaabulaan, sharciyad iyo mataalad xaq ah ka helaan xubnaha ay magacooda huwanyihiin, haddii kale waxay isu horseedi doonaan in ay dhaxal u yeeshaan magac-xumo, sumcad-beel iyo sharaf-xumo waarta. Si taa looga baaqsado ururrada bulshada rayidka ah waa in ay si xeelad ku jirta ay ugu tabaabushaystaan dib u soo noolaanshaha dawlad qaran ee Soomaaliyeed oo ah wakhtiga ku habboon ee aan sinna looga maarmin in ay jiraan ururo bulsho oo rayid ah oo abaabulan oo u babac-dhigi kara xuquuq-boob ay ku kacdo dawlad qaran.